कुन फिल्म हेर्ने, बायोपिक कि वास्तविक ? « Ramailo छ
कुन फिल्म हेर्ने, बायोपिक कि वास्तविक ?
यो शुक्रबार बायोपिक र वास्तविक घटनाक्रममा बनेका दुई फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । दृष्ट्रि गुमाएकी सृष्ट्रि केसीको जीवनीमा बनेको ‘ब्ल्याइन्ड रक्स’ र सिन्धुपाल्चोका नाकामा हुने गरेका घटनाक्रममा आधारित फिल्म ‘नाका’ फागुन १८ गतेदेखि एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् ।
मिलन चाम्सको निर्देशन रहेको ‘ब्ल्याइन्ड रक्स’ मा नायिका वेनिशा हमाल सृष्टिको भूमिकामा देखिएकी छन् । यस्तै अभिनेत्री गौरी मल्ल, बसन्त भट्ट र अभिनेता अर्पण थापा क्रमशः आमा, बुवा र प्रेमीको भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । निकेश लिम्बुको निर्माण रहेको ‘ब्ल्याइन्ड रक्स’ले बुधबार सम्पन्न प्रिमियरमा प्रशंसा पाएको छ । प्रिमियारको भिडियो हेर्नुस :
अमित श्रेष्ठको डेव्यु निर्देशन रहेको फिल्म ‘नाका’ मा अभिनेता बिनिन कार्की मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । विपिनसँगै फिल्ममा रोविन तामांग र थिन्ले लमोको मुख्य भूमिका रहेको छ । नाकाले एक वर्गका दर्शकलाई हलमा आकर्षण गर्ने अपेक्षा छ । हाईलाइट्स नेपालसँग सहकार्यमा मिडिया पोर्टले फिल्म निर्माण गरेको हो । ‘नाका’को प्रोमो हेर्नुस :